ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ပြန်လည် အခြေချဖို့ ရှိမရှိ တုန့်ပြန် ဖြေကြားခဲ့တဲ့ #ဘိုအာ့စ် - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ပြန်လည် အခြေချဖို့ ရှိမရှိ တုန့်ပြန် ဖြေကြားခဲ့တဲ့ #ဘိုအာ့စ်
May 8, 2020 - by Editor
လက်ရှိ ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း ကလပ် မာဆေးလ် အသင်း ရဲ့ မန်နေဂျာ အန်ဒရေ ဗီလာ ဘိုအာ့စ် ဟာ ပေါ်တူဂီ လူမျိုး တဦး လည်း ဖြစ်ကာ ၊ ပေါ်တို အသင်း နဲ့ အတူ နာမည်စရခဲ့ပြီးနောက် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှာ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခဲ့ပါတယ် ။
ဘိုအာ့စ် ဟာ နာမည်ကြီး ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ် နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ ရာသီ တဝက်လောက်မှာပဲ ရာထူး ကနေ ဖယ်ရှားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဘိုအာ့စ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ စီနီယာ ကစားသမား တွေကို နေရာ မပေးခဲ့တာကြောင့် ၊ ဆက်ဆံရေး ပြိုလဲကျခဲ့ရကာ ၊ ရလဒ်ကောင်း တွေ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် ဘိုအာ့စ် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ နောက်ထပ် အခွင့်အရေး ရဖို့ အကြောင်း ဖန်လာခဲ့ကာ ၊ အခြား လန်ဒန် မြို့ခံ ကလပ် တသင်း ဖြစ်တဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်း ဟာ နောက်တရာသီ အစမှာပဲ ဘိုအာ့စ် ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ပထမ တရာသီ မှာတော့ ဘိုအာ့စ် ဟာ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်တဲ့ ထိပ်ဆုံး ၄သင်း စာရင်း ကို ဝင်ရောက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
တော့တင်ဟမ် အသင်း တာဝန်ရှိသူ တွေကတော့ ၎င်းကို အခွင့်အရေး ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ နောက်တနှစ် မှာ တော့တင်ဟမ် အသင်း ဟာ အဓိက ကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ် ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်း ထံသို့ ရောင်းချခဲ့ပြီး ၊ အဲ့ဒီ က ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေး တွေနဲ့ ဘိုအာ့စ် ဟာ ကစားသမား အများအပြား ထပ်ဝယ်ခဲ့ပေမယ့် တယောက် မှ အသုံးမတည့်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ကစားသမားသစ် တွေသာ အဝယ်များပြီး ရလဒ်ပိုင်း ကောင်းအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာမှာတော့ ဘိုအာ့စ် တယောက် တော့တင်ဟမ် ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ အခုအခါ မှာတော့ ဘိုအာ့စ် ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်း တွေကို မာဆေးလ် အသင်း နဲ့ အတူ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ၊ ဒီရာသီ မှာ မာဆေးလ် အသင်း ကို အဆင့် ၂ နေရာ မှာ ရပ်တည်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးထားပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ မျက်နှာပန်း မလှခဲ့တာကြောင့် ဘိုအာ့စ် ဟာ အင်္ဂလန် ကို နောက်တကြိမ် ပြန်လည် အခြေချဖို့ စိတ်နာနေကာ ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ပြောင်းလာဖို့ထက် ဂျေလိဂ် က ကလပ် တသင်း ကိုပဲ ကိုင်တွယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်း ပြတ်ပြတ်ပဲ ထုတ်ပြောလာပါတယ် ။
RMC Sport နဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ဘိုအာ့စ် က ” လူတွေက ကျွန်တော့ ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ပြန်ဖို့ထက် Dakar Rally ဒေသ မှာပဲ အလုပ်လုပ်တာ မြင်ချင်ကြပါတယ် ။ ပထဝီနည်း အရတော့ ကျွန်တော် ဟာ ဂျပန် မှာ မန်နေဂျာ လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ ဂျပန် ရဲ့ ဘောလုံးပွဲ တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓလေ့တွေကို လေ့လာချင်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး ဘိုအာ့စ် က မာဆေးလ် အသင်း နဲ့ ၎င်းတို့ အကြား အနာဂတ် ကိစ္စ အကြောင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” လက်ရှိ အချိန် ကျွန်တော့ အတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာ က အနာဂတ် မှာ အသင်း ကို ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ဆက်သွားမလဲ ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါကို ကျွန်တော့ အနေနဲ့ သေသေချာချာ နားလည် သဘောပေါက်ဖို့တော့ လိုပါမယ် ။ ”
” ကျွန်တော့ နဲ့ တသားတည်း ရှိမယ့် သူတွေကို သေသေချာချာ ပြန်ပြီး ဆန်းစစ်ရပါမယ် ။ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တချို့ ကိုလည်း ကျွန်တော် တို့ လိုချင်ပါတယ် ။ အခု အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ဟာ မာဆေးလ် အသင်း မှာ အတော်လေး အဆင်ပြေနေပါတယ် ။ မာဆေးလ် အသင်း နဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ချင်ပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် စီးပွားရေး အခြေအနေ အရ ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လောက်ထိ ရှေ့ဆက်နိုင်မလဲ ဆိုတာ အရင် ကြည့်ရပါမယ် ။ ဒီနေရာ မှာ ကျွန်တော် တို့ဖက်က အင်အား တောင့်တင်းမှု မရှိဘူး ဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ် လို ပြိုင်ပွဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ ဝင်ပြိုင်ရတာ အလဟဿ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ အားကစား ဒါရိုက်တာ နဲ့ အတူ ကျွန်တော် တို့မှာလည်း အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် မှာ အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမား တချို့ကို ခေါ်ယူဖို့ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ရာသီကုန်အောင်ဆက်သွားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဖလားစယူတဲ့ ပိုချက်တီနို ၊ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ချန်ပီယံ ၊ ဖိုင်နယ်က စောင့်တဲ့ ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ကြွေးကြော်သွားတဲ့ ပိုချက်တီနို
January 15, 2021 - by Editor
ဗြိတိန် နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကိုဗစ်ပိုး ပြန့်နှံ့မှု များပြား လာပေမယ့် အင်္ဂလန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် က တော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ပြီးဆုံးအောင် ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ အချို့ ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေ ကို …
ဥရောပ ချန်ပီယံ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် အနိုင်ယူကာ ပိုကယ်ဖလား ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွါစေခဲ့တဲ့ ဒုတိယ တန်းကလပ် Holstein Kiel
ဆယ်စုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး Playmaker အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ
လီဗာပူး vs မန်ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်အပါအဝင် ဘာဘာတော့ဖ်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ခန့်မှန်းချက်များ
January 16, 2021 - by Editor
ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ပွဲကောင်းတွေက စောင့်ကြို နေပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အာရုံကတော့ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဖီးမှာ ကျရောက်နေပြီး လက်ရှိ ချန်ပီယံ လီဗာပူးဟာ လက်ရှိ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ခါးသီးပြိုင်ဘက် မန်ယူနိုက်တက်ကို လက်ခံ ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီး အသင်းဟာ …
အူဘာမီယန်း အလွန် အာဆင်နယ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာ နိုင်သူကို ရွေးချယ် ပေးလိုက်တဲ့ ဆီဗက်စတား
ယူနိုက်တက်ရဲ့ နိုင်ပွဲက လီဗာပူူး အတွက် ဝမ်းနည်းစရာ ၊ ချောက်ချားစရာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား